MindMapping နှင့်လုပ်ငန်းအတွက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း Martech Zone
အင်္ဂါနေ့, မေလ 22, 2012 တနင်္ဂနွေ, အောက်တိုဘာလ 4, 2015 Douglas Karr
ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည် Mindjet သည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်အထူးဒီဇိုင်းသစ်တစ်ခုကိုစတင်ခဲ့သည်။ ထို့အပြင်၎င်းတို့သည်၎င်းတို့၏ Connect သို့အဆင့်မြှင့်တင်မှုများပြုလုပ်ခဲ့သည် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်အလုပ်စီမံခန့်ခွဲမှု ထုတ်ကုန် - ၀ က်ဘ်၊ ဒက်စတော့နှင့်မိုဘိုင်းထုတ်ကုန်များတွင်အချိန်မရွေး၊ နေရာမရွေးပူးပေါင်းရန်အပြည့်အဝပေါင်းစပ်ထားသည် site အသစ် အသစ်သောဖြေရှင်းချက်ကိုက်ညီရန်) ။
Mindjet Connect V4 သည်ထုတ်ကုန်ဆင့်ကဲပြောင်းလဲမှုကိုဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရန်အတွက်အကြံဥာဏ်များနှင့်အစီအစဉ်များကိုထိုအစီအစဉ်များအားအကောင်အထည်ဖော်ရန်အတွက်အသုံးပြုသူတစ် ဦး ၏အတွေ့အကြုံကိုပေးသည်။
Mindjet Connect အသုံးပြုသူများသည်ယခုရပြီ
Connect ၏ Vision နှင့် Action element များအကြားရှိထိပ်တန်းသွားလာမှု၊ တစ်ခုတည်း၊ ချောမွေ့သော web အတွေ့အကြုံကိုဖန်တီးခြင်း၊ ပူးပေါင်းခြင်းနှင့် ပူးပေါင်း၍ အကြံဥာဏ်များ၊ မဟာဗျူဟာများနှင့်အစီအစဉ်များကိုအကောင်အထည်ဖော်ခြင်းနှင့်ပြီးစီးခြင်းမှတစ်ဆင့်အစပျိုးသတ်မှတ်ခြင်းနှင့်ခြေရာခံနိုင်ခြင်းတို့ဖြင့်ပြုလုပ်သည်။
ထုတ်ကုန်ကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့အလွယ်တကူ ၀ င်ရောက်နိုင်ရန်အတွက်ဂူဂဲလ်နှင့်ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်မှတစ်ဆင့်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းတစ်ခုတည်း
ရရှိနိုင်သည့်သိုလှောင်မှုပမာဏမှာ Basic အတွက် 2GB သို့စီးပွားရေးအတွက်5GB အထိတိုးလာသည်
မကြာမှီလာမည်! Mindjet ကို Android နှင့်ပေါင်းစပ်ခြင်း
Mindjet ၏ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်အနေဖြင့်ကုမ္ပဏီအနေဖြင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၊ ပူးပေါင်းမှုအတွက် Mindjet ကိုမည်သို့အသုံးပြုသည်ကိုပိုမိုတိကျစွာထင်ဟပ်သောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၊ ဤအသစ်သောကမ်းလှမ်းမှုဖောက်သည်လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန်ပိုမိုအာရုံစိုက်နေကြသည်။ အားလုံးကမ်းလှမ်းမှုများပါဝင်သည် မင်္ဂလာပါMindjet ၏ဒဏ္desktopာရီဆန်သော desktop software နှင့် Mindjet မိုဘိုင်း application များ။
Mindjet သည်လိုအပ်သောအဖွဲ့အစည်းများအတွက်ရည်ရွယ်သည် မျိုးစုံပြည်တွင်းရေးအဖွဲ့များနှင့်ပြင်ပမိတ်ဖက်များနှင့်အတူပူးပေါင်းCloud-based နှင့် ၀ န်ဆောင်မှုဆိုင်ရာပူးပေါင်းမှုနှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်ပံ့ပိုးမှုများကိုပါကမ်းလှမ်းသည်။
ဝန်ထမ်းများယခုလျင်မြန်စွာမှပြောင်းရွှေ့နိုင်ပါတယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းသဘောတရားနှင့်ထို့နောက်ချက်ချင်းသူတို့အားအစီအစဉ်များနှင့်လုပ်ငန်းများကိုအပေါ် execute ဖြစ်စေအများပြည်သူမိုcloud်းတိမ်၌တည်၏ ခ်ိတ္ဆက္ပါ) သို့မဟုတ် (Share မှတဆင့်) လုံခြုံသော SharePoint ပတ်ဝန်းကျင်၌ SP ကိုဆက်သွယ်ပါ).
Mindjet သည်ဖြေရှင်းနည်းပုံစံများနှင့်ထပ်မံလေ့ကျင့်သင်ကြားခြင်း၊ ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့် ဦး စားပေးဖောက်သည် ၀ န်ဆောင်မှုနှင့်ပံ့ပိုးမှုတို့နှင့်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးခြင်းလည်းပါ ၀ င်သည်။
အသင်းများအတွက် Mindjet အယူအဆမှစီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းသို့လျင်မြန်စွာပြောင်းရွှေ့လိုသည့်ဌာနများနှင့်အုပ်စုများအတွက်ဖြစ်သည်။ ၀ န်ထမ်းများသည် Mindjet ၏အစွမ်းထက်သော MindManager ကို၎င်း၏ကြံ့ခိုင်သောဉာဏ်စမ်းဉာဏ်စမ်းနှင့်အစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်းများ၊ Mindjet Connect's Vision and Action module များနှင့် Mindjet ၏လူကြိုက်များသောမိုဘိုင်း application များဖြင့်ရရှိသည်။ သို့မှသာမည်သည့်နေရာ၊
Mindjet for Individuals သည်စိတ်ကူးစိတ်သန်းများဖန်တီးရန်၊ သတင်းအချက်အလက်များကိုစီမံခန့်ခွဲရန်နှင့်အခြားသူများနှင့်အလုပ်လုပ်ရန်မျှဝေရန်လိုအပ်သောသတင်းအချက်အလက်လုပ်သားများအတွက်အကောင်းဆုံးသောထုတ်ကုန်ဖြစ်သည်။ ပညာရှင်များသည် Mindjet ၏အစွမ်းထက်သော MindManager ကိုခိုင်မာသောဉာဏ်ရည်ဉာဏ်စမ်းနှင့်အစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်းများ၊ Mindjet Connect နှင့် Mobile တို့နှင့်အတူမည်သည့်နေရာ၊ မည်သည့်နေရာ၊ မည်သည့်နေရာတွင်မဆိုအလုပ်ကိုမျှဝေနိုင်သည်။
Mindjet ကိုယခုမှတ်ပုံတင်ပါ။ အခြေခံအကောင့်သည်အခမဲ့ဖြစ်သည်။
Tags: ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းဆက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းMindjetစိတ်ရောဂါပလက်ဖောင်းစီမံကိန်းကိုစီမံခန့်ခွဲမှုsharepointအဖွဲ့tools တွေ
Google's Bogus URL အတိုကောက်စာရင်းအင်းများ
လူမှုမီဒီယာ - တိုင်းတာ။ မရသောအောင်မြင်မှုလား။